Internet la’aan maanta ka jirta magaalada Muqdisho iyo howlihii oo weli isku xayiran – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Internet la’aan maanta ka jirta magaalada Muqdisho iyo howlihii oo weli isku xayiran
Waxaa tan iyo xalay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya ka jirtay Internet la’aan baahsan, taas oo saameyn weyn ku yeelatay dhamaan howlihii ka socday xafiisyada dowladda iyo shirkadaha qaaska loo leeyahay.
Abaarihii 9.00pm fiidnimo ee xalay ayaa la sheegayaa in halmar la waayay adeegii Internetka ee magaalada Muqdisho ee qaar ka mid ah magaalooyinka ku yaala gobolada dalka Soomaaliya.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegaya in cilad weyn ay ku timid qadadka Internet-ka ee loo yaqaano Fibre Optic-ga kaas oo si weyn looga isticmaalo guud ahaan Soomaaliya, iyo dalalka dariska ah.
Shaqaalaha shirkadaha bixiya adeegyadda Internet-ka ayaa haatan dadaal xoogan ugu jira sidii ay macaamiishooda u qancin lahaayeen, inkastoo aysan si cad u sheegi karin halka ciladdu ka jirto.
Dhinaca kale, doodaha musharixiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya oo lagu waday in maanta la bilaabo ayaan weli la guda gelin, iyadoo teleefishinka SNTV oo baahin lahaa doodahaasi Internet la’aan haysato.
Waxaa madasha doodda ka dhici lahayd ku sugan musharixiinta maanta u ballansanaa dooddaasi, balse waxaa loo sheegay in la hakiyay illaa laga helaayo adeegga Internet, si tebin toos ah loogu baahiyo teleefishinka SNTV.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay ee Internet la’aan baahsan ay ka dhacdo magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya, taasi oo saameysay howlihii sida xowliga ahaa uga socday xarumaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay.